ဇွန်လ(၉)ရက် နေ့နေ့လည်(၁း၀၀) အချိန်တွင် ရခိုင် ပြည်နယ်၊စစ်တွေမြို့ မှ နောက်ဆုံးရသတင်း။/အသံဖိုင် ~ Rohingya Blogger
ဇွန်လ(၉)ရက် နေ့နေ့လည်(၁း၀၀) အချိန်တွင် ရခိုင် ပြည်နယ်၊စစ်တွေမြို့ မှ နောက်ဆုံးရသတင်း။/အသံဖိုင်
လီဟူစိန် ၏ သမီး ဖြစ်သူ နုရ်အာရှာ အသက်(၇၀)နှစ်သူ၏သမီး ဘေဂမ်နှင့် မြေးဖြစ်သူမီနာရာအသက် (၇) နှစ် တို့ သည် (၀၉-၀၆ ၂၀၁၂) ယနေ့နေ့ လည် ၁း၀၀ ခန့်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၊အောင်တိုင်းမြို့မှ နေရပ်ဖြစ်သောမကျည်းမြိုင်ရွာအမှတ်(၉)ရပ်ကွက်သို့ လိုင်းကားဖြင့် ပြန်လာရာ မေယုဈေး၊ဝေသာလီကွင်း သို့ ရောက်ရှိချိန်တွက် ရခိုင်မောခ် လူတစ်စုသည်အတင်း ၀င် ဆွဲ ရမ်းကား ပြီး နုရ်ဘေဂမ်အား ၄င်း လိုင်းကားပေါ်တွက် ဓားရှည် ဖြင့် ခုတ်ပြီး ဒဏ်ရာ ရ ကာ သူ ၏ မိခင် နှင့် သမီး ဖြစ်သူ ကို ရခိုင်မောခ် များက အတင်း ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ထို အချိန် တွက် ကား ပေါ်တွင် ဓာဏ်ရာများ ရခဲ့သော နုရ်ဘေဂမ် သည် ထွက်ပြေး လွတ်မြောက် ခဲ့ သည်။ နုရ်ဘေဂမ် သည် ညနေ ၅း၀၀ အချိန်ခန့် တွင်မိမိ နေရပ် အနီး သို့မသေမရှင် ဖြင့် ရောက် ရှိပြီး ၄င်း၏ မိခင် နှင့် သမီးငယ်ကို ရပ်ကွက်ရှိ လူအများအား ပြောပြရာ ၀ိုင်းဝန်းရှာဖွေစဉ် မေယုဈေး။ ဝေသာလီကွင်း တစ်နေရာတွင် ဓားဒဏ်ရာ များဖြင့်ကိုယ်နှစ်ပိုင်းပိုင်း ပြီး ပစ်ထားသော အလောင်း ကို တွေ့ ရပြီး အသက် (၇) နှစ်၇ှိသော ကလေး ငယ် ကို ယခု ချိန်ထိ အစရှာမတွေ့ ပါ။ သို့ ရာတွင် ဘင်္ဂါလီ မွစ်စလင်များက ၄င်း၏ အဖွားအလောင်း ကို တောင်းယူခဲ့ ပါသည်။
၄င်းတို့ ၏ ဒုတိယ အစီအစဉ် မှာ အစ္စလာမ် ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးများ ၀တ်ဆင်သော အင်္ကျီအဖြူ အရှည်(ကွရ်ဒါ) နှင့် ခေါင်းစောင်း ဦးထုပ် အစုံ (၄၀၀) ခန့်စုစောင်း ထားပြီး၎င်း အ၀တ်အစားများ ၀တ်ဆင်ကာ ပုံမှားရိုက် သတ်ဖြက်မှုများ ဆူပူသောင်းကြမ်းမှုများ ဆက်လက် ကျူးလွန်ရန် ကြံစည်နေကြောင်းသိရသည်။
၄င်း တို့ ၏ အကြံ အစည် သည် ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးများအား မုန်းတီးရန် နှင့် ဒုက္ခပေးရန် သက်သက် ဖန်တီးနေသည်ကို သိရှိရပါသည်။၄င်း တို့ ၏ မသမာမှုများကိုသက်ဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေး တာဝန်ရှိ လူကြီးများမှာကြိုတင်ကာကွယ် ပေးပါရန် အသိပေးအပ်ပါသည်။၄င်း တို့ လူစု မှာ ဘုမေရွာ ဘူတာရုံ အနီးတ၀ိုက်တွင် လက်နတ်မျိုးစုံနှင့် အဖျက်လုပ်ငန်းများ အတွက် လောင်စာ ဆီများ စုဆောင်းလျှက် ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
UPDATED NEWS: Rakhine are gathering people by using loud speakers. Several other villages including Kondan have been set on fire. It is still burning. Rakhine are shouting to finish the Rohingyas from Arakan by using loud speakers. It is also reported the Rakhine , dressed in the form of Muslim religious leader, are entering the Muslim villages and setting the houses on fire. The local authorities are encouraging the Rakhine to finish the Rohingyas.Police station No (1) from Sittwe are forcing some Rakhine who are not firing Muslims populated village (Hazimya Village- 0.5 mile from Sittwe Airport).NaSaKa forces are taking all the youth guys from Maungdaw Townships last half an hour ago.All available rice in Maungdaw Market have been taken away by the Rakhine extremist backed Security forces in order to cause "food insecurity" so as to starve Rohingyas (Local time 23:00)Eventhough curfew was imposed most of the muslims shops were destroyed and goods worth millions of of kyats (local time 23:30).
Rakhine tried to burn Nazeer Vilage (1 mile from Sittwe Airport) but they couldnt (half an hour ago).Accordingly to reliable sources there is not much security all of the Rohingya villages. =============================================== Newer Post